Ngabe kunjani ukuhlolwa kwemoto? Sikutshela lapha | Ezezimali Zomnotho
Ngabe kunjani ukuhlolwa kwemoto?
UJose recio | | Umnotho jikelele
Linganisa imoto Kungumsebenzi wezomnotho obaluleke kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lokuthengiselana ekuthengeni nasekuthengiseni le ndlela yokuhamba yangasese. Kepha lokho kuthola ukubaluleka okukhethekile okwamanje okuyisenzo esibalulekile ku linganisa inani lalo. Vele kunikeza iziqiniseko ezinkulu zomsebenzi futhi kuzophinda kube ukwesekwa okubaluleke kakhulu ukuze umthengi walokhu kusebenza okuhle atholakale kalula.
Akunakukhohlwa ukuthi lapho ubhekene nalokhu kuhlolisiswa kwemoto kuzodingeka ukuthi uhlaziye imingcele eminingana ngesimo sayo sangempela. Phakathi kwabo, uphawu, imodeli, ubudala kanye ne-mileage kuyabonakala, phakathi kokunye okufanele kakhulu. Kulokhu, kunamathuluzi ahlukene angasiza kakhulu kwesinye isikhathi noma kwesinye. Isibonelo, ukuhlolwa online eselidume kakhulu eminyakeni yamuva ngenxa yokuthola kalula intengo elungile ngayinye yalezi zimoto. Futhi lokho kungenziwa ngokunethezeka ekhaya, kukhompyutha yomuntu siqu. Kuze kube seqophelweni lokusinikeza inani elikhombisayo kunani lazo.
Kodwa-ke, ifomula ethembeke kakhulu yokuthola inani elifanele isuselwa kuzinsizakalo ezinikezwa abahloli bezingcweti. Yize kunengozi enkulu yokuthi ezinye zalezi zibalo kungenzeka kusevisi yenkampani ezinikele ekuthengweni nasekuthengisweni kwezimoto. Lapho ngokungangabazeki ungakhipha ukuhlanekezelwa okuthile ukuze wazi ukuthi izindleko zakho zisebenza malini ngempela. Ngokuyisisekelo ngenxa yokungabibikho okuyize noma okuyindlala kwezinhloso zayo. Kungaleso sikhathi lapho abasebenzisi bacabanga ukuthi alikho elinye isu kusuka emabhizinisini ukuze babe nale datha enesiqinisekiso esikhulu ekuthembekeni kwayo.
1 Wazi kanjani intengo yangempela yemoto yakho?
2 Imithethonqubo yokuhlaziywa kwemoto
3 Amapharamitha alawa amatafula
Wazi kanjani intengo yangempela yemoto yakho?
Ebhekene nalesi simo, enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuphuma ukuya emithonjeni esemthethweni ezonquma ukunikezwa kwale datha ebaluleke kakhulu kubashayeli. Ukufeza le nhloso, esinye seziphakamiso ezinhle kakhulu ukuqoqa ifayili le- amatafula wokulinganisa imoto loMgcinimafa. Ingenye yezinhlelo ezinokwethenjelwa kakhulu ukwazi intengo yanoma yisiphi isigaba sezimoto. Kuze kube seqophelweni lokuthi yileso esisetshenziswa yizinhlangano zombuso ezisemthethweni futhi nangezinhlangano eziqoqayo ezizimele futhi kwezinye izikhathi ngisho nezinkampani zomshuwalense uqobo eziphethe ukukhangisa izinqubomgomo zezimoto.
Yebo, kusuka kunhlangano yongqongqoshe (uMnyango Wezezimali) iphethe ukwenza umthetho oqondile minyaka yonke inhloso yawo enkulu ukukwenza ukulawulwa ngamanani entengo yokuthengiswa kwezimoto ezingamasekeni. Okokuqala, kuzoba yinkomba engasetshenziswa noma nini ukuthola ukuthi yini isilinganiso semoto uma ufuna ukwenza ngokomthetho ukusebenza kwezomnotho. Ngokuyisisekelo ekuthengisweni kwayo.
Imithethonqubo yokuhlaziywa kwemoto
Esebenzisa lolu hlelo olusemthethweni lokuhlola, umsebenzisi uzoba namathuluzi adingekayo wokubala inani lalesi sakhiwo ngemizuzu embalwa. Ngalesi sikhathi, i-oda HFP / 1895/2016 selisebenza, eligunyaza amanani entengo aphakathi nendawo asetshenziswayo ekuphathweni kweNtela Yezokuhanjiswa Kwemigwaqo kanye Nemithetho Yezomthetho Ebhaliwe, Intela Yezamafa kanye Neminikelo kanye Nentela Ekhethekile Ngezindlela Ezithile Zokuhamba. Isici esifanelekile sifakiwe ku-athikili 2 yale mithethonqubo futhi lapho kucaciswa khona ukuthiIzintengo ezijwayelekile zokuthengisa, ezivunywa yilo mbandela, zizosetshenziswa njengezindlela zokuqinisekisa ngezinhloso zeNtela Kokuthunyelwa Kwezimboni kanye Nemithetho Yezomthetho Ebhaliwe, Intela Yezamafa kanye Neminikelo kanye Nentela Ekhethekile Ngezinye Izindlela Zokuhamba".
Ngalo mthetho, abasebenzisi basesimweni sokuthola amanani emoto unyaka nonyaka. Le oda esibhekise kuyo iyahambelana nonyaka owedlule, futhi ngalo mqondo kunezinyanga ezimbalwa zokushicilela amanani ahambisanayo alo nyaka. Ukuze bavumelane namazinga amasha akhiqizwe emakethe yezimoto. Kunoma ikuphi, kufanele kubhekwe ukuthi amatafula okulungisa asetshenziswa yizinhlaka ezisemthethweni ukulungisa intengo yangempela maqondana nesikhathi kusukela imoto ibhalisiwe okokuqala.
Amapharamitha alawa amatafula
Ukunquma lezi zintengo, kucatshangelwa ukuhlukahluka kokubaluleka okukhethekile empilweni yemoto. Phakathi kokugqame kakhulu imodeli, ukubhaliswa, ukufuduswa, amandla ekusebenzeni kwayo naseminyakeni yamuva noma ngabe izinga lokungcola lingakanani. Ngalo mqondo nokunikeza imininingwane kubasebenzisi balezi zindlela zokuhamba, i Incwadi yezindaba ezisemthethweni zoMbuso (I-BOE) ishicilela uhlu lapho ibhekisa ekulinganisweni kwemoto ngayinye. Lapho kucatshangelwa unyaka wentengiso yawo kanye nobubanzi obukuyo.
Ukuzivumelanisa nokuhlinzekwa kanye nokufunwa kwale makethe, i-Agency Agency ibheka i- amanani aphakathi nendawo yalezi zimoto. Kepha kungabhekiseli kuphela ezimotweni ezisetshenziswayo nezimoto, kepha kufaka nezimoto ezingekho emgwaqeni ngisho nezithuthuthu. Ngale ndlela, kuzoba lula ukuxazulula le datha ebalulekile. Ngokuqinisekile zingafana kakhulu nalezo ezinikezwe ezinye iziteshi ezingekho emthethweni, kepha azifani ngokuphelele.
Akunakulibaleka ukuthi ukuhlolwa kwangasese, noma kwenziwa online, kuthinta enye idatha esetshenziswa yilawa matafula. Kepha ngomehluko omkhulu lokho asikho isici sokulungisa esisetshenziswayo. Futhi ngalo mqondo, kungenye yezinto eziguqukayo ezinomthelela wokuthi inani esinikezwe lona lingelangempela kakhulu. Ngenzuzo eyengeziwe yokuthi ngeke kube khona intshisekelo yezohwebo ethintekayo ukuqoqa lolu lwazi oludingeka kakhulu kubo bonke abashayeli bezimoto. Hhayi ukudayiswa kuphela, kepha ngesici nje selukuluku lokuthi ubone ukuthi ifa lethu lifinyelela kangakanani. Kulokhu, kusetshenziswa amatafula ezimoto.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ngabe kunjani ukuhlolwa kwemoto?
Yiziphi izitayela zokuhweba emakethe yamasheya?